Fencing amin'ny toeram-pambolena masoandro
Amazon (NASDAQ: AMZN) androany dia nanambara tetik'asa angovo vaovao momba ny angovo sy angovo avy amin'ny masoandro any Etazonia, Kanada, Espana, Suède ary UK. Ny orinasa izao dia manana tetik'asa angovo azo havaozina 206 manerantany, ao anatin'izany ny tetikasan'ny rivotra sy ny herinaratra 71 ary ny tampon-trano miisa 135 amin'ny fotodrafitrasa sy ny stor ...
Maninona no mampiasa fefy vy?
Ny karazana fefy apetrakao dia mamaritra ny kalitaon'ny fiarovana azonao antenaina. Fefy tsotra mety tsy ho ampy. Weld harato, na fefy tontonana vita amin'ny vy, dia tampon'ny safidy fiarovana izay manome anao fahatokisana ilainao. Inona no fefy vy tariby? Welded wire harato dia ho an'ny ...
Ahoana ny fametrahana fefy rojo rojo
ANATOMIANA FANORENANA FITIAVANA CHAIN ​​STEP 1 Ataovy kajy hoe ohatrinona ny fitaovana ilainao ● Asio marika ny toerana tena tianao ahitanao ny zoro, vavahady ary farano amin'ny paositra spray na zavatra mitovy amin'izany. ● refesina ny halavany eo anelanelan'ny paositra farany. ● Afaka manafatra ny halavany marina ianao ...
Ahoana ny fiasan'ny fefy amin'ny masoandro?
- Tombony sy fampiharana Inona no atao hoe fencing amin'ny masoandro? Nanjary lohahevitra lehibe ny fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao ary ny fiantohana ny fiarovana ny fananan'ny olona iray, ny voly, ny zanatany, ny ozinina sns no zava-dehibe indrindra amin'ny tsirairay. Solar fencing dia fomba maoderina sy tsy mahazatra izay iray amin'ny t ...